पारिवारिक कानून | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: परिवार कानून
एक पंजीकृत किशोरीको सम्बन्धमा एक किशोर निरीक्षकको जिम्मेवारी के हो?
एक पंजीकृत किशोर सम्बन्धमा बाल मामिला निरीक्षकको जिम्मेवारी के हो? जीवनमा, यो जानिन्छ कि केवल अभिभावकहरू स्प्यान्क हुन्छन्। र कुरा गर्नुहोस् र मिनेट लेख्नुहोस्। इन्स्पेक्टरको काम नियमित छ ...
अपरिचित कसरी पहिचान गर्ने?
अक्षम कसरी घोषणा गर्ने "प्रक्रिया" धेरै लामो छ। १. अदालत जाँदै। २. मनोचिकित्सक परीक्षा (बिरामी वा बाह्य रोगी) 1.. अदालतको निर्णय अपनाउनु (अयोग्यको रूपमा मान्यता वा अयोग्य घोषणा गर्न अस्वीकार) सामान्यमा ...
उत्सवको लागि दावी कसरी लेख्न।
गुनासो को लागी दाबी को बयान कसरी लेख्न। फारम र दावीको बयानको लागि आवश्यकताहरू कलामा दिइन्छ। रूसी संघको नागरिक प्रक्रिया कोडको १131१; तपाईंले संकेत गर्नु आवश्यक छ: १) अदालतको नाम जुनमा पेश गरिएको छ;
कुनै व्यक्ति विवाहित छ वा छैन भने कसरी पत्ता लगाउने?
कसरी थाहा छ यदि एक व्यक्ति विवाहित छ वा छैन भने? एकल सूचना डेस्क - होईन, तर पासपोर्टको साथ नजिकैको रेजिस्ट्री अफिसमा जान लायक छ - तिनीहरूले तपाईंलाई त्यहाँ कल गर्नेछन् र उनीहरू तपाईंलाई भन्नेछन् ...
बालबालिकाको बिना बच्चाको समर्थन
मैले भर्खरै मजिस्ट्रेटलाई सम्बन्धविच्छेद बिना बच्चा समर्थन दायर गरें, तर यदि बच्चाको निवास स्थानको बारेमा कुनै विवाद छैन भने, अदालत तपाईको पक्षमा हुनेछ। कसैले पनि तपाईलाई मुद्दा हाल्न रोक्दैन ...
अस्पतालमा मानसिक रोगी कसरी राख्ने?
मानसिक रोगी मानिसलाई अस्पतालमा कसरी राख्ने? १. अदालतको निर्णयबाट २। वा उसको व्यक्तिगत सहमतिबाट। रूसी संघको कानून बमोजिम "मनोचिकित्सक हेरचाह र यसमा नागरिकहरूको अधिकारको ग्यारेन्टीमा ...
एच। 1 आर्ट .157 यू.एस. आर. सहभागिता को दुर्भावनापूर्ण चोरी।
भाग १ को रसियाली संघ को फौजदारी संहिताको धारा १ al al को गुनाहक चोरी। १०-१-1 बर्षमा, सायद तपाईको बच्चा सम्मानित राज्य संस्थामा केही प्रतिष्ठित काम लिन जान्छ, र विशेष जाँचको क्रममा थाहा भयो कि बुबाको मुद्दा चलिरहेको छ ..।
UFC के हो?
युएफसी भनेको के हो? यो मसलाको संघीय कोषागार (रूसको ट्रेजरी) एक संघीय कार्यकारी संस्था (संघीय सेवा) हो, जुन, रूसी संघको कानून बमोजिम संघीय बजेट, नगद कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कानून प्रवर्तन कार्य गर्दछ।
भन्नुहोस्, कुन अवस्थामा बुबाले आमाबाबुलाई आमाबाबुले आमाबाबुलाई मार्न सक्छन्?
मलाई भन्नुहोस्, कुन परिस्थितिमा बुबाले तलाकको अवस्थामा आमाबाट बच्चालाई मुद्दा हाल्न सक्छ? यदि उसको स्थिति अदालतको रायमा बढी अनुकूल छ भने। सबै कुरा धेरै व्यक्तिपरक छ !!! वास्तवमा, यदि तपाईं तुरून्त उठ्नुभयो भने संभावनाहरू बढ्दछन् ...
पूर्णतासँग पूर्ण वा पहिले नै कर वेतन बाट गणना गरिएको?
के पोटली पूर्ण तलबबाट कटौती गरिएको छ वा यो पहिले नै कर लगाईएको छ? र गुजारा पनि पुरस्कार बाट हटाईन्छ? उदाहरण को लागी, तलब १ 15,०००, जसबाट भत्ता २ 000% घटाइन्छ। र त्यसपछि मात्र कर गणना गरिन्छ ...
अनुच्छेद 69 को आधारमा, आरएफ सीसी अदालतमा पितृत्वबाट बञ्चित हुन सक्छ, र कुन कागजातहरू आवश्यक छ?
आरएफ आईसी को धारा 69 of को आधारमा अदालतमा पितृत्वबाट वञ्चित गर्न सम्भव छ, तर कुन कागजातहरू आवश्यक छन्? जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट र कागजातहरू तपाईंको दावी प्रमाणित गर्दै। अनुच्छेद।।। विपत्ति ...
कृपया सहयोग गर्नुहोस्! बालवालिकामा उपस्थित बच्चाको आमाबाबुको विवरण कसरी लेख्न।
कृपया मलाई सहयोग गर्नुहोस! बालवाडीमा भाग लिने बच्चाको अभिभावकको विवरण कसरी लेख्ने। "विशेषता" भनेको शब्द आफै हो (पानाको बीचमा लेखिएको) दायाँ कुनामा तपाईले फारम लेख्नुपर्दछ, D / s मा आवश्यक छ त्यसैले लेख्नुहोस् ...
कसरी मृतक रिश्तेदारको पेंशन बचत पाउनु हुन्छ?
कसरी एक मृतक आफन्तको निवृत्तिभरण बचत प्राप्त गर्ने? एक गैर-नाफामुखी संस्था गैर-राज्य पेंशन कोष atomgarant मा एक मृत बुबा को निवृत्तिभरण कसरी प्राप्त गर्ने कोष रकम भुक्तानी मृतक को भुक्तानी हुन्छ यदि उनी १ 1974 2012 मा जन्मिए र २०१२ मा मरे भने ...
कुन आधारमा मातृत्व अधिकारबाट बच्न सकिन्छ?
कुन आधारमा उनीहरूलाई मातृ अधिकारबाट वंचित गर्न सकिन्छ? कला S S SK RF - अभिभावक / ती मध्ये एक / अभिभावकीय अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्छ यदि उसले: आमाबाबुको कर्तव्य त्याग्छ, समावेश सहित ...
एकजना विरूद्धको मृत्यु पछि जो आवासको मालिक हो? पत्नी र बच्चाहरु। वा पत्नीको सुरुवातमा, र उनको मृत्यु पछि नै पहिले नै छ
एक जना पति / पत्नीको मृत्यु पछि, कसले आवासको अधिकार पायो? पत्नी, पति र बच्चाहरू। वा श्रीमती, श्रीमान्को शुरुवातमा र उनको मृत्यु पछि बच्चा, पति / पत्नी, मृतकका आमाबुवा पहिले नै बच्चाहरू हुन्।
आफैलाई दावीको कथनको जवाफ कसरी रचना गर्ने?
आफैं दावी को बयान को लागी प्रतिक्रिया कसरी तयार गर्ने? यसलाई समीक्षा भनिन्छ। ... मुद्दाको अभियोगमा न्यायाधीशको नाम लेख्नुहोस् वादी वादीलाई संकेत गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईको सेट आउट गर्नुहोस् ...
के म आफ्नो उपनाम एक तलाक पछि एक वर्ष को प्रेमिका को बदल सकते हो? र कुन कागजातहरू लागू गर्न सकिन्छ?
के म सम्बन्ध विच्छेदको एक बर्ष पछि मेरो थर मेरो पहिलो नाममा परिवर्तन गर्न सक्छु? र कुन कागजातहरूका साथ आवेदन गर्ने? तिमी सक्छौ! सुरू गर्नका लागि, रेजिस्ट्री अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोस्, त्यसपछि - रूसी संघको FMS को क्षेत्रीय निकायमा ...
संरक्षकको दर्ता गर्न कुन कागजात आवश्यक छ?
अभिभावक दर्ताका लागि कुन कागजातहरू आवाश्यक हुन्छन्? धेरै। तपाइँ अभिभावकमा जानु पर्छ र त्यहाँ तपाइँलाई एक सूची दिइने छ, केहि संगठनलाई अनुरोध दिइन्छ र मेड पास गर्न रेफरल दिइनेछ। मद्दत ...
पालनपोषण गर्ने अभिभावकहरूले बच्चाको लागि कति तिर्ने गर्छन्? ... फोस्टर बच्चाका लागि भुक्तानीहरू र लाभहरूको मात्रा
पालनपोषण गर्ने आमाबाबुले बच्चाको लागि कति तिर्ने गर्छन्? ... पालनपोषण गर्ने बच्चाको लागि भुक्तानी र भत्ताहरूको मात्रा पालकका बच्चाहरूको मर्मतको लागि कोषको भुक्तानी भोजन, कपडा, जुत्ता, नरमको लागि मासिक भुक्तानी गरिएको रकम।
जब तपाइँ तलाक गर्नुहुन्छ तुरुन्तै सम्पत्तीको विभाजनको लागि आवेदन गर्नु पर्छ? र तपाईं तलाक पछि पछि यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ? कत्तिको लागि?
के तपाईं सम्बन्ध विच्छेद को मामला मा तुरून्त सम्पत्ति को एक प्रभाग को लागी फाइल गर्नु पर्छ? के म पछि यो गर्न सक्छु, डिभोर्स पछि? कति समय लाग्छ? पूर्व बीच सम्पत्ती को विभाजन को लागी सीमा अवधि ...